आज अप्रिल फुल्स डे : यसरी सुरु भयो मूर्ख ब’नाउने च’लन
Homeसमाचारआज अप्रिल फुल्स डे : यसरी सुरु भयो मूर्ख ब’नाउने च’लन
April 1, 2021 admin समाचार 3127
संसारभर १ अप्रि’ललाई मूर्ख बनाउने दिनका रुपमा मनाइन्छ । आजका दिन धेरैले एकअर्कालाई झुक्या’उँछन् र जिस्क्याउँछन्, तर अन्य दिन जसरी मजा’क गर्ने वा झुक्याउने व्यक्तिसँग आज कोही रिसाउँदैन । यही नै यस दिनको विशेषता हो । किंवदन्ती’अनुसार प्राचिन युरोपमा नयाँ वर्ष १ अप्रिलमा मनाइन्थ्यो । १५८२ मा पोप ग्रेगोरी तेह्रौले १ जनवरीलाई नयाँ वर्ष मान्ने गरी नयाँ क्यालेन्डर जारी गरे । रोमका कतिपय मानिसले यस नयाँ क्या&लेन्डर अपनाए ।
तर कति’पयलाई नयाँ वर्ष परिवर्तन भएको थाहै भएन र उनीहरु १ अप्रिललाई नै नयाँ वर्ष मनाउथ्ये । त्यसैले यस्ता मानिसलाई मूर्ख सम्झिएर अन्यले मजाक उडाए । अप्रिल फुल दि’वसका बारेमा अर्को एउटा प्रचलित जान’कारी चाहिँ यस्तो पनि छ । भनिन्छ, पहिलेको क्यालेन्डरमा अप्रिल महिना देखि नयाँ वर्ष शुरु हुन्थ्यो तर पछि क्यालेन्डरमा संसो’धन गरी जनवरी देखि नयाँ वर्ष शुरु गरियो ।
यो संसो’धनलाई सबैभन्दा पहिले फ्रान्सले अपनायो । सन् १५६४ मा फ्रान्सका तत्कालिन राजा चार्ल्स न’वौंले अध्यादेश जारी गरी पहिलो जनवरी देखि नयाँ वर्ष शुरु हुने घोषणा गरे । जनताले राजालाई स्वीकारेर पहिलो जनव’रीलाई वर्षको शुरुवात मान्न थाले । तर कतिपय जनताले चाहिँ यो परि’वर्तनलाई सहज रुपमा स्वीकार्न सकेनन् । उनीहरुले पहिलो अप्रिललाई नै वर्षको शुरुवात मानिरहे । यिनैलाई अन्य जनताले हाँसो गरी मूर्ख भनी गिज्या’उन थाले र अप्रिल एकलाई ‘मूर्खहरुको दिन’ भनी नामकरण गरे ।
यसरी पहिलो अप्रि’ललाई वर्षको शुरुवात मान्नेहरूलाई उनीहरुले हाँस उठ्दो, गिज्याउने खालको उपहारहरू प’ठाएर खिसी उडाउन थाले । तिनी’हरुलाई विभिन्न तरिकाले झुक्याएर मूर्ख बनाउन थाले । त्यहीबाट नै पहिलो अप्रिलका दिन अरुलाई मूर्ख बनाउने प्रच’लनको शुरुवात र विस्तार हुँदै गयो भनिन्छ ।
अप्रि’ल फुल यसअघि नै सुरु भएको थियो भन्ने दावी पनि छन् । एक किम्वदन्तीले १३९२ बाटै मानि’सलाई १ अप्रिलमा मूर्ख बनाउन थालिएको थियो भन्छ, यस दाबीअनुसार ‘नन्स प्रिन्स टेल’ कथामा कथाकार जियोफ्रे काउस्स’रले मार्चको ३० र थप २ दिन भनेर ३२ मार्चको संकेत गरेका छन्, यसलाई कतिले १ अप्रिल भनेर अथ्र्या’एका छन् र यतिबेला पनि झुक्या’उने खेल हुन्थ्यों भनेका छन् ।
यद्यपी, १ अप्रिल कहीं उल्ले’ख छैन । केही रिपोर्टका अनुसार १५०८ मै एक फ्रान्सेली कविले आफ्नो रचनामा अप्रिल फूलको सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए । अर्को एक दाबीअनुसार १५३९ कवि ‘डे डेने’ ले आफ्नो रच’नामा १ अप्रिलमा धनाढ्य मालिकले आफ्ना नोकरलाई मूर्खतापूर्ण कामका लागि पठाएको विषय उल्ले’ख गरेका छन् । अप्रिल फुल युरोप, अमेरिकासहित विश्वका धेरै देशमा म’नाइन्छ र यस्ता धेरै किंवदन्ती प्रचलनमा छन् ।
१९१५ मा जर्म’नीको लिले हवाई अड्डामा ब्रिटिस पाइलटले बमजस्तै वस्तु फ्याँकेको विषय अप्रिल फुलको वर्णन गर्दा सधैं चर्चामा आउँछ । यसलाई देखेर मानिसह’रूबीच भागदौड नै मच्चियो, त्रस्त मानिसहरु लामो समय लुके । तर बम नपड्किएपछि उनीहरु फर्कि’एर आए । त्यहाँ बम होइन, एउटा फुटबल फ्याँ’किएको रहेछ, जहाँ लेखिएको थियो – अप्रिल फुल । रातोपाटीबाट
ओलीको का’रवाहीमा परेपछी, नेपालको पहिलो पटक ओलिलाई खुल्ला चुनौती (भिडियो सहित)
अन्तर्वार्तामै रोए मनोजराज, भन्छन् छोरी परितोषिकालाई मैले हरेक पल सम्झि’रहन्छु(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 20, 2020 admin समाचार 5059
मनोज राज सिवकोटी र अन्जु पन्त प’हिले श्रीमन श्रीमती थिए। अहिले उनिहरु एक अर्का बाट छु’टिएर आ आफ्नो जिन्दगी बाचिरहेको छ । अन्जु पन् को संघ’र्स देखी नै साथ दिएर आएको मनोज राज अहिले भने
१३ वटी श्रीमतीहरुलाई एकैपटक गर्भाधारण गराएर नयाँ रेकर्ड
October 17, 2020 admin समाचार 8721
कुनै पनि मानि’सको श्रीमती कति ज’ना होलान् । अ’वश्य पनि एक जना । किनकी कुनै मा’निस बरु पटक पटक धेरै’संग प्रेममा पर्न सक्छ । तर जी’वन काट्ने सा’थी अर्थात श्री’मती भने एक मात्र हुन्छन् ।
भेटियो नदीमा हा, म फाल्नु आघि आयशाले लेखेको पत्र, जसमा लेखिकी थिइन् यस्तो मनछुने शब्द (भिडियो सहित)
March 8, 2021 admin समाचार 3538
मानिसले देह त्या’ग गर्नु अघि के सोच्दो हो ? यस्तो प्रश्न सबैको मनमा आउन सक्छ । भारतमा एक महिलाले नदिमा हा’म फा’लेर देह त्या’ग गर्नु अघि बनाएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा ब्या’पक सेयर भै रहेको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215230)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (206988)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (206645)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (205564)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204357)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (203593)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201840)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201682)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (193996)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170776)